Caqabado: Sababaha Aasaasiga ah ee Isku Beddelaya Spam Referrer In WordPress iyo Google Analytics
Spam waxay isticmaali kartaa meel xafidan si ay u soo diraan xayawaan, Trojans, ama fayrusyada ama ka faa'iideystaan ​​jilicsanaanta isticmaalaha waxayna u diraan si khalad ah oo khatar ah iyo fayras si toos ah. Si kastaba ha noqotee, spam wuxuu ubaahan yahay isticmaalaha, laakiin hubaal isticmaaluhu uma baahna. Marka aad furayso WordPress, waa lagama maarmaan in mid ka mid ah qalab loo isticmaalo si loo xakameeyo faafinta by spam.
Spam u gudbinta waa mid ka mid ah noocyada saameynaya WordPress oo saamayn xun ku yeelan kara nidaamka Google Analytics. Waxay u muuqataa on website ranking s sidaas u noqdaan algorithms raadinta ka dhanka ah. Jack Miller, oo ah Maamulaha Guusha Macaamilka ee Macaamiisha Semt , ayaa sheegay in farsamooyinka ugu fiican ay tahay in la xakameeyo spam dirirta labada Google Analytics iyo WordPress.
Waxay leedahay hal ujeedo oo ah in lagu khaldanayo shaqeynta matoorada raadinta. Spammers waxay diraan xiriiro badan iyo URL-yada si ay u kordhiyaan darajada bogga ee gaarka ah. Sida caadiga ah waxay ku xiranyihiin xiriiro laakiin marwalba waxay ku xiran yihiin goobta gaarka ah. Gaaban, waa wakhti yar oo lagu wanaajinayo darajooyinka raadinta iyada oo aan la bixin wax qiimo leh. Haddii warbixinta falanqeyntu ay ku jirto warbixintan, waxay macnaheedu noqon doontaa in website-ka uu dib ugu laabanayo goob tayo wanaagsan leh. Waxay hagaajineysaa darajada bogga, laakiin haddii Google uu qeexayo farsamadaan, waxay ciqaabi karaan goobta si ay ula shaqeeyaan shabakad junk ah.
Google iyo makiinadaha kale ee raadinta ayaa la yimid qaab difaac ah si looga hortago in badan oo ah gudbinta spam ee goobaha. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala ayaa lagula talinayaa in ay sameeyaan tallaabooyin taxaddar ah si loo yareeyo dhibaatooyinka.
gudbinta spam waxay magaceeda ka heleysaa habka ay ula falgalaan Google Analytics. Sida mulkiilaha bogga, mid ayaa doonaya in uu arko boggaga internetka ee taraafiga tarjumada. Spammers waxay ka faa'iideysanayaan tan oo waxay rajeynayaan in ay gujiyaan boggooda internetka iyagoo tixraacaya warbixinta Google Analytics
Faa'iidooyinka lagu xakameynayo Spam Referral
Mid ka mid ah saameynta spam gudbinta waa in uu faragalin doono qiimeynta mustaqbalka ee website-ka. Si loo sii wado ololaha suuq-geynta, mid waa inuu xaqiijiyaa in goobta ay sii wado inay bixiso waxtarka tayada leh martida. Joogitaanka spam gudbinta ayaa wax u dhimaya ujeeddadaas. Sidaa daraadeed, ka hortaggu wuxuu kudhici karaa bogga milkiilaha ee khariidadda xiriirka liita ee saboolkooda..Dhammaan waxay sameeyaan way ku sii adkeeyeen booqdaha si ay u helaan waxyaabaha ku habboon. Ugu dambeyntii, waxaa jira sidoo kale suurtagal ah in mid ka mid ah laga yaabo inuu riixo websaydh kaas oo ka kooban waxyaabo waxyeello leh
Xayiraadda Spam Referrer ee WordPress iyo Google Analytics
Ku rakib Dalabka Spam Plugin
Fiiri bogga farta loo adeegsado spam ee xawaaraha iyo soo dajinta iyo ku rakibo muraayadaha gashiga WordPress. Waxay fureysaa dhamaan sifooyinka iyo qaababka. Kadibna dhaqdhaqaaqa. Qalab kale oo loo isticmaalo waa Sucuri, SpamReferrerBlock, ama WP Block Referrer Spam
Waxaa jira tab ah dhinaca dhinaca bidix ee WordPress ee loo yaqaan Referrer Spam. Riix halka iyo soo socda xayeysiinta gudbinta soo socda ee soo socota. Xulo ikhtiyaarka si aad u cusbooneysiiso cusbooneysiinta si aad u hubiso in ay xayaysiiso marwalba maalin kasta. In Block Mode, dooro Block Blew haddii uu u shaqeeyo si dhakhso ah oo uu ku socdo heerka server. Sida hoos ku qoran Macluumaadka Cusub, waa meesha ay ka mid tahay mid ka mid ah casriyeynta qaylo-celinta gudbinta, gaar ahaan haddii uu jiro xiriir shaki aan weli la nadiifin.
Hubinta casriyeynta ugu dambaysa iyo macaamiisha gaarka ah
Mid ka mid ah bogga spam ee soo gudbinta, waxaa jira xulasho sare oo hoose ee casriga ugu dambeeya, taas oo ku wargalineysa marka user uu sameeyay cusbooneysiintii ugu dambeysay. Waa qalab aad u fiican oo tilmaamaya wax ku oolnimada plugin. Haddii ay jiraan tiro yar oo spammy ah oo ku jira warbixinta, nuqul ka samee oo ku dhaji xidhiidhka sanduuqyada gaarka ah ee habka gacanta. Ka dibna badbaadi dhammaan isbeddelka iyo ka bixitaanka
Meelaha laga mamnuucay bogagga
Riix 'Spamer Spam Tab' oo aad dooratid Dhamaan Xarumaha Laheen. Kadibna wuxuu daaqad la furayaa dhammaan URL-yada la xiray, midna wuu furmi karaa iyada oo aan wax khatar ah lahayn
Ka gudubka Dabaysha Wareejinta Ghost
Furan Google Analytics si loo go'aamiyo haddii ay tahay nidaam shaqo. Qaar ka mid ah boggaan waxaa laga yaabaa inay soo maraan sababtoo ah waxay yihiin gudbinta Ghost micnaheedu maaha in ay goobta u galaan si aysan u ekaysiin karin. Raac nidaamka soo socda: guji Dhageystayaasha, dooro Teknolojiyada, ka dibna Shabakadda. Raadi oo dooro Macaamiisha sida cabbirka aasaasiga ah. Ka fiiri dhamaanba domyada iyo liistada dhammaan kuwa sharciga ah. Riix on Admin, filtarrada, ku dar filtarrada, nooca filter nooca, ka dibna ku dar. Dooro badbaadinta iyo ka bixida. Dib ugu noqo shaashadda si aad u aragto haddii ay hadda shaqaynayso Source .